Kundize amadilozi bebhikishela "umalugaju" - Ilanga News
Home Izindaba Kundize amadilozi bebhikishela “umalugaju”
Basola amaphoyisa ngokuhudula izinyawo
ABESIFAZANE baseMthwalume bathi sekwanele ngokubulawa kwabo.
izithombe ngu:sANDILE makhoba
KUNDIZE amadilozi nemisubelo emoyeni abesifazane betshengisa intukuthelo ngomalugaju osolwa ngokuqeda amantombazane eMthwalume.
Laba besifazane bebevutha bhe, bethi sekwanele ngokunukubezwa kwabesifazane. Bebegqoke izimpahla ezimnyama, bephethe izingqwembe ezibhalwe imiyalezo ezwakalisa intukuthelo yabo, bephethe namakhandlela.
Bahambise uhlu lwezikhalo zabo emaphoyiseni. Bathi sekucacile ukuthi amaphoyisa ase-Hibberdene ayahluleka wukwenza umsebenzi njengoba lo malugaju osolwayo esecekele phansi imiphefumulo yamantombazane angu-7 kusukela ngonyaka owedlule.
Bathi amaphoyisa bayawabikela kodwa afika ngesikhathi sawo noma agcine engafikanga.
Indlela abebedinwe ngayo abanye babo bebebhikisha baze bakhumule amadilozi bawaphathe ngezandla bememeze bethi “into enisibulalela yona ihlala la, kungcono nithathe wona amadilozi kunokuthi nisibulale”.
Isikhalo esikhulu besibheke esiteshini samaphoyisa ababika ngaphansi kwaso iHibberdene, bafuna ukuba sivalwe ngoba bathi asibasizi ngalutho.
Bacela ukunikwa imvume yokubika izinkinga zabo ePort Shepstone.
UHlengiwe Gambushe obekhuluma phambili emele umphakathi ngesikhathi edlulisa uhlu lwezikhalo, uwatshele emehlweni amaphoyisa ukuthi awawenzi umsebenzi wawo.
“Sicela izinja zamaphoyisa ezizofakwa kulesi simoba okutholakala kusona izingane zifile. Sicela ukuphathwa ngendlela elinganayo, singacwaswa.
“Izimoto ezihamba zima ebusuku sicela ziphele ngaphandle uma kungeyendawo futhi ipake ngakubo kwayo,” esho.
Banxuse nokuthi uhulumeni asukumele labo ababulawelwe izingane zabo, banikezwe usizo lokwelulekwa ngokwengqondo.
Okwenza kusolakale ukuthi ngumalugaju owenza lokhu wukuthi zonke izisulu kuthiwa zigilwa zibulawe ngendlela efanayo. Izidumbu kuthiwa zitholakala zingasenazo izicubu zomzimba okubalwa amabele, isitho sangasese namehlo.
Ezinye izisulu kuthiwa ziye zitholakale sekwedlule izinyanga zalahleka. Laba besifazane bakhala nangokuthi kwesinye isikhathi uma bebika emaphoyiseni ngokulahleka kwengane batshelwa ukuthi isendodeni, abalinde izobuya.
Baphinde banxusa nobuholi bendawo okubalwa inkosi nomkhandlu wayo ukuba bangenelele kulolu daba ngoba isizwe siyabhubha. Bashaye imashi baze bayojika ngaphandle emzini wenkosi befuna ukuyokhala nakuyona.
Abesilisa bebezimele buqama, bebukela imashi iqhubeka. Laba besifazane asebephila ngokwesaba bathi sebevule iWhatsApp group, yabo bodwa lapho abazisana khona uma kukhona osekwenzekile.
Amaphoyisa abeqaphe isimo awazange ayiphazamise imashi kodwa abezimele ebukela. Amanye azwakale encoma abesifazane abebemasha. NgoLwesibili bathi bazohlangana futhi ukuzozwa izimpendulo.
Okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uThembeka Mbhele uthi bona abakakuqinisekisi ukuthi uMalugaju lo.
“Thina siphenya amacala amabili, elokubulala kanye nelokutholakala kwabantu sebeshonile,” esho.
Previous articleBalahlwe ngelakubo kucwila izizumbulu zabo “ebhanoyini”
Next articleEyaseKZN engcupheni ‘yokuchithwa’ yiPSL